Boriborosy Axis 5 tsara indrindra sy famonosana fako amin'ny milina fanamboarana milina sy trano milina | MEIXIN
2 Môtôfà Bufta Axis
5 Axis sy milina famonosana 1 Tufting
Boriborosy Axis 5 tsara indrindra sy famonosana fako amin'ny milina fanamboarana milina sy trano milina
Boriborosy Axis 5 tsara indrindra sy famonosana fako amin'ny milina fanamboarana milina sy trano milina.
5 Axis borosy sy famonosana famafazana baomba ary milina famonosana ny rafi-piarovana ny vokatra dia natao hisamborana ireo fihoaram-pefy ary hiaro ny singa elektronika anatiny amin'ny fanapotehana volavolan-tany avo.
Ity vokatra ity dia tsy mora resahina amin'ny endriny rehetra. Ny fitaovam-pamolavola avo lenta nataony dia mahatanty ny fepetra mivaingana toy ny hatsiaka sy ny hafanana izay miteraka fiovana. 5 Axis borosy sy baomba fandefasana baomba ary milina mihidy
Ity akanjo ity dia hanampy ilay mpiakanjo mba hijoro eo amin'ny vahoaka ary hiseho ho malefaka kokoa noho ny hafa.